Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. गढीमाई मेलाको व्यवस्थापन समिति छनोटको लागि निर्वाचन – Emountain TV
गढीमाई मेलाको व्यवस्थापन समिति छनोटको लागि निर्वाचन
बारा, २६ भदौ । गढीमाई मन्दिरको मेलाको व्यवस्थापन समिति छनोटको लागि निर्वाचन भएको छ । ठूलो संख्यामा दिइने पशुबलिका कारणले विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरमा यही मंसिरमा हुने पञ्चबर्षीय मेला व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन भएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ओमप्रकाश केशरीका अनुसार विहिवार बिहान आठ बजेबाट सुरु भएको मतदान साँझ पाँच बजे सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा आठ हजार भन्दा बढी मतदाताहरु सहभागी भए ।
मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिको नेतृत्व लिन बिभिन्न राजनीतिक दलले प्यानल नैं बनाएर आ–आफ्ना उम्मेदवारहरु अघि सारेका छन् भने कतिपयले आफ्नै दल बिरुद्ध बागी उम्मेदवारी समेत दिएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृत केशरीका अनुसार राजपा र फोरमले संयुक्त प्यानल बनाएर चुनावमा होमिँदा नेकपा र काँग्रेसले छुट्टा–छुट्टै रुपमा प्यानल बनाएर आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेका छन् ।
चुनावका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा चार/चार, सचिव र सहसचिवमा तीन/तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने चार सदस्यको लागि १८ जनाको उम्मेदवारी परेको प्रमुख केशरीले जानकारी दिनुभयो ।
यो निर्वाचनलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिने हुँदा निर्वाचनलाई सहज बनाउन सुरक्षा निकाय केही दिन अघि देखि नै सुरक्षा व्यवस्थापनमा जुटेको थियो ।
यता मन्दिरका नाममा आर्थिक चलखेल गर्न पाउने भएकाले निर्वाचनमा संसदीय निर्वाचन भन्दा बढी तडकभडक भएको स्थानीयहरुको भनाई छ । राज्यले यसको महत्व नबुझिदिंदा भौतिक पुर्वाधारमा पछि परेको गढीमाई मन्दिरका मुल पुजारी मंगल सिंह थारुले बताउनु भयो ।
यस चुनावबाट निर्वाचित बोर्डले मंसीरमा हुने मेला सञ्चालन गर्नेछ । विशुद्ध धार्मिक संस्था भए पनि यसको सञ्चालन र विकासका लागि हुन लागेको नयाँ नेतृत्व चयन, स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचन भन्दा चर्को देखिएको छ ।
अत्यन्तै महत्वका साथ हेरिने यो निर्वाचनलाई समर्थन जुटाउन यति बेला आ–आफ्ना दलका संघिय, प्रादेशिक मन्त्रीहरु र केन्द्रिय नेता समेत बाराको गढीमाई मन्दिर परिसरमा उत्रेका छन् । आउँदो मंसिर १७ गते देखि करिब एक महिना सम्म गढीमाई मेला लाग्ने छ ।